Ithimba Neklayenti - SHENZHEN LONGRAY TECHNOLOGY CO., LTD.
I-Longray iphishekela kuphela umshini wekhwalithi engcono kakhulu ngentengo ethengekayo kukhasimende.
I-Longray ibheka kakhulu impilo ende yesevisi futhi iqinisekisa ukuphepha komshini wethu kumakhasimende kuyinqubo ebalulekile yokuklama esigabeni sokuthuthukiswa futhi isetshenziswe ekukhiqizeni.Isistimu yokuphatha ikhwalithi ngokuya nge-ISO 9001:2000 igadwa yithi futhi ingaphansi kokuhlolwa kwamabhuku kwaminyaka yonke yinhlangano yezitifiketi.
Umkhiqizo we-Longray uphumelele amaphrothokholi amaningi okuhlola amazwe ngamazwe.Umkhiqizo uthole isitifiketi esivela ku-World Health Organization [WHO] kanye ne-Conformite Europeenne [CE] phakathi kokunye.Izitifiketi eziningi zamazwe ngamazwe ziyatholakala uma ziceliwe kukhasimende.
I-Longray isebenzela ikhasimende emazweni angaphezu kuka-130, sisekela ikhasimende lethu ngenethiwekhi yabasabalalisi esunguliwe, enokuhlangenwe nakho emhlabeni wonke nangemva kwethimba labadayisi elihlinzeka ngokuqeqeshwa, ukulungisa, nosizo lobuchwepheshe.
Abanye beKlayenti lethu